My iPhone Touch Screen na-adịghị arụ ọrụ! Nke a bụ ndozi. - Iphone
achọrọ m nchekwa icloud
iphone na -egosi chaja mana ọ gaghị agbanye
iphone 6s gbakwunyere na -akụghị
My iPhone Touch Screen na-adịghị arụ ọrụ! Nke a bụ ndozi.
Ọ bụ ihe okike inwe nkụda mmụọ mgbe ihuenyo mmetụ iPhone gị anaghị arụ ọrụ. Use na-eji iPhone gị maka ihe niile, site na ịkpọ oku ka ịpịgharịa site na foto - mana ekwela ka 'nsogbu ihuenyo mmetụ gị' mee ka ị daa. N'isiokwu a, m ga-akọwa gịnị mere ihuenyo mmetụ na iPhone gị anaghị arụ ọrụ , otu esi edozi nsogbu ndi nwere ike edozi ya n'ụlọ, ma kwado ụfọdụ nhọrọ ndozi dị ukwuu, ọ bụrụ na a bịa na nke ahụ.
E nwere ọtụtụ ihe mere gị iPhone ihuenyo mmetụ nwere ike ịkwụsị na-arụ ọrụ. Obi dị m ụtọ, e nwekwara ọtụtụ ụzọ iji dozie nsogbu ndị ahụ.
Gịnị Mere My iPhone Touch Screen anaghị azaghachi?
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ịchọpụta gịnị kpatara gị iPhone ihuenyo mmetụ. Emekarị, nsogbu na-kpatara mgbe akụkụ ahụ nke gị iPhone si ngosi na Filiks emetụ (akpọ digitizer ) na-akwụsị ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ mgbe ngwanrọ nke iPhone gị kwụsịrị 'ịgwa' ihe ngwaike ahụ ka o kwesịrị. Ndị ọzọ okwu, ọ pụrụ ịbụ a ngwaike ma ọ bụ nsogbu sọftụwia, m ga-enyere gị aka na isiokwu a.
Nchọpụta nsogbu nsogbu iPhone software anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla. Ọ dịkwa mfe karịa ihichapụ ihuenyo gị na iko mmiri (biko emela nke a). N'ihi nke a, anyị ga-amalite site na ndozi ngwanrọ wee gaa n'ihu idozi nsogbu anụ ahụ ma ọ bụrụ na ị ga - eme ya.
Ihe edeturu banyere tụlee na nkwafu: Ọ bụrụ na ị kwụsịrị iphone gị na nso nso a, nsogbu bụ nsogbu ngwaike bụ ụta maka nsogbu ihuenyo mmetụ gị - mana ọ bụghị mgbe niile. Ngwa ngwa na nsogbu ndị na-abịa ma na-aga na-abụkarị nsogbu software.
Otu ihe ikpeazụ iburu n'uche bụ na a na ihuenyo n'echebe nwere ike ime ka ihuenyo mmetụ nke na gị iPhone. Gbalịa wepu ihe nchebe ihuenyo nke iPhone gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ihuenyo mmetụ ahụ.
lee okwu m na mbata na ọpụpụ
Ọ bụrụ na ihuenyo mmetụ gị na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ , na-agụ ihe. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ma ọlị, mafere na ngalaba n'okpuru akpọ Mgbe iPhone gị azaghị imetụ gị aka ma ọlị .
Okwu ngwangwa na iPhone Touch Disease
iPhone aka ọrịa na-ezo aka a usoro nke nsogbu na isi-emetụta iPhone 6 Plus. Nsogbu ndị a gụnyere isi awọ, mmanya na-acha ọcha n'elu ngosipụta yana nsogbu ndị a na-egosipụta na iPhone, dịka tuo na-mbugharị na Reachability.
E nwere ụfọdụ arụmụka banyere ihe na-akpata iphone mmetụ ọrịa. Apple na-ekwu ọ bụ nsonaazụ nke 'ịda ọtụtụ ugboro n'elu ala siri ike ma nwekwuo nrụgide na ngwaọrụ ahụ.' Ha maara nsogbu ahụ ma nwee usoro mmezi a kapịrị ọnụ ma ọ bụrụ na ịnwe nsogbu a na iPhone gị. iFixIt meghere iPhone 6 Plus ma chọpụta ihe ha kpọrọ a “Imewe ntụpọ.”
N'agbanyeghị ihe na-akpata nsogbu ahụ n'ezie, ịnwere ike iburu iPhone gị na Apple na dozie ya maka ego ọrụ $ 149 .
Software Nsogbu na gị iPhone Touch ihuenyo
A nsogbu na software na-agwa ekwentị gị otú e si eme ihe nwere ike ime ka gị na iPhone ihuenyo mmetụ kwụsị ọrụ. Ọ nwere ike inyere iji tọgharịa nsogbu software ma ọ bụrụ na gị na iPhone ihuenyo mmetụ na-adịghị arụ ọrụ.
iphone anaghị chaja mana ọ sị na ọ bụ
Ihuenyo mmetụ gị ọ na-akwụsị ịzaghachi mgbe ị na-eji ụfọdụ ngwa? Ngwa ahụ nwere ike ịta ụta. Gbalịa iwepu ma degharịa ya. Iwepụ ngwa:
Chọta ngwa na iPhone gị Ihuenyo mbu . Ihuenyo mbu bụ ihe ị na-ahụ n'okpuru na nseta ihuenyo dị n'okpuru.
Pịa ma jide akara ngosi ngwa ahụ ruo mgbe menu gosiri.
Kpatụ Hichapụ App .
Kpatụ Hichapụ .
Ọ bụrụ na ihuenyo mmetụ iPhone gị anaghị arụ ọrụ mgbe ị megharịrị ngwa ahụ, zipu ozi na ngwa ngwa. Ha nwere ike idozi nsogbu ahụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ngwọta ugbua.
Kedụ ka m ga - esi zipụ ozi na ngwa Mmepụta?
Pịa iji mepee Storelọ Ahịa .
Kpatụ Chọọ na ala ihuenyo ma chọọ ngwa.
Kpatụ ya akara ngosi ngwa imeghe nkowa banyere ngwa.
Pịgharịa gaa na ala ma pịa Mmepụta weebụsaịtị . Weebụsaịtị ndị nrụpụta ga - ebu.
Chọọ maka ụdị kọntaktị ma ọ bụ adreesị ozi-e na weebụsaịtị onye nrụpụta. Okwesighi ike ịchọta ya na onye nrụpụta ahụ kwesiri nnu ha. Cheta na ezigbo ndị mmepe na-enwe ekele maka ya mgbe ị na-eme ka ha mara maka nsogbu na ngwa ha!
Ọ dị obere, mana oge ụfọdụ software sọftụwia iPhone nwere ike ibute nsogbu ihuenyo mmetụ. Ihe edepụtara ederede kachasị ọhụrụ nke ihe a na-eme bụ nwelite Apple's iOS 11.3. Nsogbu edoziri ngwa ngwa Apple melite.
enwere m nrọ na mmadụ na -achọ igbu m
Meghee Ntọala na pịa General -> Mmelite ngwanrọ . Kpatụ Ibudata na Wụnye ma ọ bụrụ na mmelite iOS dị na iPhone gị.
Mgbe iPhone gị azaghị imetụ gị aka ma ọlị
Nsogbu ihuenyo mmetụ nke na-eme n'ọtụtụ ngwa ma ọ bụ mgbe ịnweghị ngwa mepere emepe nwere ike ibute nsogbu na ngwanrọ nke iPhone. Nzọụkwụ nchọpụta mbụ dị mma bụ ịme ka iPhone gị dịghachi ma laghachi ọzọ, mana ọ na-esiri ike ime nke ahụ mgbe ihuenyo mmetụ gị anaghị arụ ọrụ! Kama, anyi kwesiri ime a nrụpụta siri ike . Nke a bụ otu:
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị agbanyụ n'ụzọ nkịtị - ma ọ bụ ọ bụrụ na ịgbanwuo iPhone gị ma laghachi ọzọ anaghị edozi nsogbu ahụ - gbalịa ime nrụpụta siri ike. Iji mee nke a, Jigide bọtịnụ Ike na Home n'otu oge ahụ. Chere ọtụtụ sekọnd, ruo mgbe Apple logo na-egosi na ihuenyo, na ka na-aga.
Na iPhone 7 ma ọ bụ 7 Plus, a na-eme nrụpụta siri ike site na ịpị na ijide bọtịnụ ike na olu ala button ọnụ maka ọtụtụ sekọnd ruo mgbe ị hụrụ akara Apple gosipụtara na ngosipụta ahụ.
Iji tọgharịa iPhone 8 ma ọ bụ ihe atụ ọhụụ, pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, pịa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe ihuenyo ga-acha oji na akara Apple gosipụtara na etiti ngosipụta ahụ.
A ike nrụpụta inikiet inikiet niile nke ndabere Filiks na gị iPhone na nwere ike akpata nsogbu software. Ọ na-emekarị adịghị, mana ọ bụ ezigbo echiche naanị mee nrụpụta siri ike mgbe ị mkpa ka .
otu esi edozie bọtịnụ ụlọ 6 iphone
My iPhone Touch Screen Ka Na-adịghị arụ Ọrụ!
Gị iPhone ihuenyo mmetụ ka na-enye gị nsogbu? Ọ nwere ike ịbụ oge na-agbalị iweghachi gị iPhone ya mbụ ntọala. Tupu ime nke a, jide n'aka na ndabere gị iPhone . I nwere ike ime nke a site na ịkwụnye iPhone gị na kọmputa ma na-agba iTunes (PC na Macs na-agba ọsọ Mojave 10.14), Finder (Macs na-agba ọsọ Catalina 10.15), ma ọ bụ eji iCloud .
M nwere ike ikwu n'ịrụ a DFU (Ndi an-kpọ femụwe Mmelite) weghachi. Nke a na ụdị weghachi bụ a bit ọma karịa a omenala iPhone weghachi. Iji mee nke a, ị ga-achọ iPhone gị, eriri iji gbanye ya na kọmputa, na ụdị kachasị ọhụrụ nke iTunes.
Ibute gị iPhone n'ime DFU mode nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ. Maka usoro ịga ụkwụ dị mfe, lelee isiokwu anyị na-akọwa nke ọma -esi etinye gị iPhone n'ime DFU mode . Mgbe ịmechara, laghachi ebe a.
Mgbe akụrụngwa imetụ gị aka dị n’aka
Ọ bụrụ na ịhapụ iPhone gị n'oge na-adịbeghị anya, ị nwere ike imebi ihuenyo ahụ. Ngosipụta gbawara agbawa bụ otu n’ime ihe ịrịba ama doro anya nke ihu igwe mebiri emebi ma nwee ike ibute ụdị nsogbu niile na ihuenyo mmetụ.
A dobe nwekwara ike atọghe ma ọ bụ imebi siri n'okpuru-n'ígwé nke gị iPhone ihuenyo mmetụ. Ihe ị hụrụ ma tinye aka gị bụ naanị otu akụkụ nke ihuenyo mmetụ. N'okpuru, enwere ihuenyo LCD nke na-emepụta ihe oyiyi ị na-ahụ. E nwekwara ihe a na-akpọ a digitizer . Na digitizer bụ akụkụ nke iPhone na-achọpụta na ị na-emetụ aka.
Ihuenyo LCD na digitizer ma jikọọ na usoro mgbagha nke iPhone gị - nke ahụ bụ kọmputa na-eme ka iPhone gị rụọ ọrụ. Idobe gị iPhone nwere ike atọghe udọ na jikọọ na LCD ihuenyo na digitizer ka mgbagha osisi. Na njikọ rụrụ arụ nwere ike ime ka gị na iPhone ihuenyo mmetụ kwụsị ọrụ.
Ihe Ngwọta MacGyver
Mgbe iPhones kwụsịrị, obere eriri ndị jikọtara na bọọdụ mgbagha nke iPhone gị nwere ike iwepụ dị nnọọ ezu maka ihuenyo mmetụ ka ọ kwụsị ọrụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enweghị mmebi anụ ahụ. Ọ bụ ogologo oge, ma gị nwere ike nwee ike idozi ihuenyo mmetụ nke iPhone gị site na ịpị akụkụ nke ngosipụta ebe eriri jikọrọ na bọọdụ mgbagha.
Dọ aka na ntị: Kpachara anya! Ọ bụrụ na ị pịa ike karịa, ị nwere ike ịgbawa ngosipụta - mana nke a nwere ike ịbụ otu n'ime 'enweghị ihe ọ bụla ịhapụ' ọnọdụ, yana nwere arụụrụ m ọrụ na mbụ.
Nhọrọ nke idozi a Broken iPhone Touch ihuenyo
Ọ bụrụ na emetụ iPhone gị anaghị arụ ọrụ n'ihi na agbajiri kpamkpam, gị nwere ike ịtụ kit ma gbalịa gbanwee akụkụ ahụ n'onwe gị, mana Agaghị m akwado ya . Ọ bụrụ na ihe agahie ma ị dochie akụkụ ọ bụla nke iPhone gị na akụkụ Apple na-abụghị akụkụ, Ogwe Genius ahụ agaghịdị ele iPhone gị anya - ị ga-anọ na nko maka iPhone ọhụụ na ọnụahịa mkpọsa zuru ezu.
Ogwe Genius ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu na ngosipụta agbajiri agbaji, mana ha na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ha. Gbaa mbọ hụ na hazie oge atọrọ ma ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta Apple Store.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchekwa ego, m nwere ike ịkwado ọrụ ndozi ndị ọzọ dị elu dị ka Pulse ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchekwa ego. Puls ga-abịakwute gị ma dozie iPhone gị dị ka obere oge dị ka nkeji 30 yana akwụkwọ ikike ndụ gị niile, ego niile karịa Apple.
Ozugbo mebiri emebi iberibe na-anọchi, gị iPhone ihuenyo mmetụ kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, sọftụwia nwere ike ịta ụta.
ike na iphone na -enweghị bọtịnụ ike
Zụta iPhone ọhụrụ bụ nhọrọ ọzọ dị mma. Idozi ihuenyo na nke ha abụghị Ọzọkwa dị oke ọnụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọtụtụ akụrụngwa mebiri mgbe ịhapụ iPhone gị, a ga-edochi ha niile. Ndozi ihuenyo gị dị mfe nwere ike ịghọ ihe dị oke ọnụ. Itinye ego na ego na ekwentị ọhụụ nwere ike ịbụ azịza kachasị ọnụ. Lelee Ngwaọrụ ekwentị UpPhone iji tụnyere ekwentị ọ bụla na ego ole ha na-akwụ na ụgbọelu ikuku ọ bụla.
Laghachi na iPhone gị
Gị iPhone ihuenyo mmetụ bụ a mgbagwoju na-adọrọ mmasị mpempe technology. Enwere m olileanya na isiokwu a enyerela gị aka ma ọ bụrụ na ị na ihuenyo iPhone anaghị arụ ọrụ, ọ ga-amasị m ịmata ụdị azịza a rụụrụ gị ọrụ na ngalaba ndị dị n'okpuru.